San Diego International Airport dia manolo-tena amin'ny angovo azo havaozina 100 isan-jato
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » San Diego International Airport dia manolo-tena amin'ny angovo azo havaozina 100 isan-jato
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny seranam-piaramanidina arahin'antoka be mpandeha indrindra any Etazonia dia miaraka amina vondrona manavao ny Tompondakan'ny Power100 izay nanolo-tena hitarika ny faritra sy ny indostrian'ny fitsangatsanganana mankany amin'ny ho avy maharitra.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Diego dia misoratra anarana amin'ny serivisy SDCP.
SDCP dia hanome angovo 100% azo havaozina, 100% tsy misy karbonina any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Diego.
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i San Diego no seranam-piaramanidina be mpitovo indrindra any Etazonia.
San Diego Community Power (SDCP), fandaharana angovo fidiram-bola tsy mitady tombombarotra, nanambara Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Diego (SAN) fisoratana anarana amin'ny serivisy sy ny fanapaha-kevitr'i SAN hisafidy ny haavon'ny serivisy Power100. SDCP dia hanome angovo 100% havaozina, 100% tsy misy karbaona ho an'i SAN, izay mitohy ho mpitarika ny fitantanana tontolo iainana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny faritra. Ny seranam-piaramanidina dia nanompo mpandeha 25 tapitrisa tamin'ny taona 2019, ka nahatonga azy io ho seranam-piaramanidina arak'asa tokana be mpandeha indrindra any Etazonia.
"Ny fananana fotoana hiara-hiasa amin'ny San Diego Community Power dia ahafahantsika mahatratra ny tanjonay ny herinaratra azo havaozina 100 isan-jato alohan'ny fotoana kasaina hatao amin'ny 2035," hoy i Kimberly Becker, filoham-pirenena sy tale jeneralin'ny seranam-piaramanidin'ny seranam-piaramanidina ao San Diego. “Ny fahafahan'ny SDCP manome angovo azo avy amin'ny karbaona aotra amin'ny vidin'ny fifaninanana dia mpanakalo lalao ho antsika sy ny olona rehetra ao amin'ny faritra.”
Ny fitantanana ny tontolo iainana dia mari-pamantarana fiasa ao SAN. Ny Authority Airport dia nametraka ny iray amin'ireo politika maharitra voalohany momba ny seranam-piaramanidina lehibe any Etazonia ary manolo-tena amin'ny fananganana sy fiasa SAN amin'ny fomba mampiroborobo ny fanambinana ao amin'ny faritra ary miaro ny kalitaon'ny fiainana.
"Faly izahay miara-miasa amin'ny Manampahefana eo amin'ny seranam-piaramanidina hampandroso ny vina iraisanay momba ny faritra madio sy salama kokoa", hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanana SDCP, Joe Mosca. "Modely lehibe ho an'ny fikambanana sy orinasa manolo-tena izy ireo hitahiry vola, tontolo iainana ary famerenam-bola amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana."